ब्लगरको लागी आचारसंहिता जरुरी छैन :अनिशा भट्टराई - MeroReport
ब्लगरको लागी आचारसंहिता जरुरी छैन :अनिशा भट्टराई
सप्तरीको राजविराजकी अनिशा भट्टराई अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र विषयमा स्नाकोत्तर गर्दैछिन । फुर्सदको समय उपन्यास पढ्न र साथीहरुसँग बिताउन मन पराउने अनिशा म्यूजिक आर्ट सोसाइटीमा कार्यरत छिन् । संस्कृति र जनजीवन बारे नयाँ नयाँ कुरा सिक्न मनपराउने अनिशाले केही वृत्तचित्रमा स्कृप्ट पनि लेखिसकेकी छिन । स्कृप्ट लेखन तथा पढाईका अलावा अनिशा ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै अनिशा भट्टराईलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
अनिशा भट्टराईलाई के भनेर चिन्ने बताइदिनुस न ।
अनिशा भट्टराई एक महत्वकांक्षी केटी हो । जसलाई चुनौती र साहासिक कार्य गर्न मनपर्छ भने म जिज्ञासु र सहयोगी पनि छु ।
मैले ब्लगिङ गर्न २०१० देखी शुरु गरेकी हुँ ।
के का लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ? ब्लगिङ गर्न कस्ता कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
मलाई मेरा विचार र अनुभवहरु बाढँन मन पर्छ त्यसैले पनि ब्लगिङ गर्छु । अनि मेरो लागि सबैभन्दा चुनौती भनेको समय ब्यवस्थापन गर्नु हो । शान्तसँग सोचेर लेख्ने समय नै हुदैँन । र लोडसेडिङ र सुस्त ईन्टरनेट पनि चुनौति कै विषय हो नेपालका ब्लगरको लागि ।
मलाई सामाजिक विषयमा मेरो अनुभवहरु लेख्न मनपर्छ ।
http://aneeshaz.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि छन् ?
यो मात्र हो अरु छैन ।
मैले त सकारात्मक नै पाएको छु । मैले केही नेपाली लेखकका ब्लगहरु हेर्ने गरेको छु तिनीहरु रमाईला र उपयोगी छन् ।
मैले फुर्सद पाएको बेला ब्लगहरु हेर्ने गर्छु । विशेष गरी सामाजिक, साँस्कृतिक र समसामायिक विषयमा लेखिएमा ब्लगहरु मेरो रोजाईमा पर्छन । lexlimbu.com, The Global and The Local, My Own Space मैले प्रायः हेर्ने ब्लगहरु हुन् ।
नेपाली ब्लगरहरु धेरै जसो त सामाजिक विषयमा नै केन्द्रित भएको पाएको छु । अनि यसको प्रयोग राम्रो र नराम्रो आधा आधा जस्तो नै छ ।
मेरो बिचारमा ब्लगरको लागी आचारसंहिता जरुरी छैन । यद्दपि, एउटा आचारसंहिता हुनु पनि कुनै नराम्रो कुरा होईन । यसले उनिहरुलाई ब्लगमा के लेख्ने,के नलेख्ने निर्देशन दिन्छ । यसले ब्लगरलाइ अँझै नैतिक बनाउँछ ।
धेरैले पालना गरेको नै देखेकी छु । कसैले पालना नगरेको देखे भने मैले त सल्लाह पनि दिने गरेको छु ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो ?
फेसबुक धेरै त फोटो शेयर गर्ने थलो भएको छ । मेरो लागि भने साथीभार्इ र आफन्तहरुका जीवन कस्तो भैरहेछ, नयाँ कुरा के भईरहेछ भनेर जान्ने थलो भएको छ फेसबुक । ब्लगले भने तपाईलाई लेखकीय स्वतन्त्रता दिन्छ । आफ्नो रुचि अनुसारको विषयमा तपाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना कुरा ब्लग मार्फत राख्न सक्नु हुन्छ ।
हो, केही हदसम्म त नागरिक पत्रकारिता भन्न सकिन्छ । तर ब्लगमा त धेरै आफ्नो ब्यक्तिगत विचार, अनुभवहरु नै राखिन्छ ।
Comment by Amuna Chapagain on January 2, 2015 at 12:12pm
Congratulations Anisha !!
Comment by Prakash Lamichhane on January 2, 2015 at 10:23am
Congratulations Anisha ji.